नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै चीन भ्रमण दलमा सहभागी थिए । हामीले घिसिङसँग प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा भएका विद्युत विकास सम्बन्धी सहमति र सम्झौताका बारेमा जान्न खोज्यौं । सबैभन्दा ठूलो जनचासो रहेको प्रश्न हामीले घिसिङलाई सोध्यौं- केरुङ र रसुवागढी हुँदै नेपाल-चीनबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन सम्भव छ ?
इतिहास बन्ने क्रममा रहेको रोपवेको तारमा अहिले कतिपयले कपडा सुकाउने गरेका छन् भने कतिपय सामग्रीहरू कवाडीको रुपमा बिक्री भइसकेका छन्
नेपालमा केवलकार सञ्चालको सम्भावना देखिएको भन्दै अग्ला स्थानका अधिकांश मन्दिरलाई दृष्टिगत गरेर धमाधम केवलकार सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालिएको छ । नेपालका डाडा“काडा“मा केबलकार सञ्चालन गर्न अनुमति माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायता मन्त्रालयमा आवदेन दिने कम्पनीको संख्या दुई दर्जन पुगेको छ । नेपालका अधिकांश डा“डाका“डामा केवलकार स:ञ्चालन गर्न सकिने विज्ञहरू बताउछन् । केवलकार सञ्चालनका विषयमा पछिल्लो समय रोप वे नेपालले का मगर्दै आएको छ । सर्वे, डिजाईन तथा परामर्श लगायतका कामहरू गर्दै आएको रो
नेपालमा खपत भएर बाँकी मात्र निकासी गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन। घाउमा नुनचुक दलेजस्तै नेपालले पाउने भनिएको निःशुल्क ऊर्जापनि निकासी नै गर्ने व्यवस्था छ।
यही कारणले गर्दा भारतले सार्वभौम नेपालको भूभागमा आयोजनाहरू निर्माण गर्दा आफ्नै नियन्त्रणमा राख्छ । कोशी तथा गण्डकी नदीहरूमा निर्मित बाँधहरूमा अहिलेसम्म पनि भारतकै नियन्त्रण छ, जुन कुरा यो तप्काको मानिसको विस्मृतिमा परेकोछ। यिनीहरू अनभिज्ञ छन् कि ७० को दशकमा भारतको सहयोगमा जलाशययुक्त १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना निर्माण प्रारम्भ हुनै लागेको बेलामा भारतले उक्त आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतलाई दिनुपर्ने माग गरेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आयोजना नै रद्द गरेका थिए
ऊर्जा देश विकासको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको छ । ऊर्जाबाट हरेक गाउँ, समाज, देश तथा विश्वलाई विकास गर्न सकिन्छ । अझैँ भन्ने हो भने नेपालमा ऊर्जाको ठूलो सम्भावना छ । विश्वमा जलस्रोतको हिसाबले दोस्रो ठूलो राष्ट्रको रूपमा रहेको नेपाल ऊर्जाको ठूलो स्रोत हो ।
सन् १९८९ मा रसियाबाट मास्टर डिग्रीे अध्ययन पूरा गरेर नेपालमा आउनुभएका मनोहर श्रेष्ठले शुरुमा बुटवल पावर कम्पनीमा काम गर्नुभएको हो । ऊहाँले झिमरुक र खिम्तीमा समेत संलग्न रही अनुभव समेट्नुभयो । बुटवल पावर कम्पनीमा रहँदा डिजाईन, कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट, आयोजना व्यवस्थापन (Project Management) लगायतका क्षेत्रहरुमा ऊहाँको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो ।
नेपालमा भइरहेका ऊर्जा विकासका कुराहरू अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित देखिँदैनन् । राज्यका उच्च तहमा बसेका कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्वदेखि देशको शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जहिले पनि ऊर्जा विकासका कुराहरू गर्ने गरेको सुनिन्छ।
क्यानडाको डालहाउजी विश्वविद्यालयबाट वायुमण्डल विज्ञानमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डा. महेश्वर रूपाखेती अहिले जर्मनीको ईन्स्टिच्युट फर अड्वान्स्ड सस्टेनबिलिटी स्टडिज, पोस्टड्याम सँग आवद्ध छन् । उहाँले काठमाडौंको वायु प्रदूषणबारे थुप्रै वैज्ञानिक अनुसन्धान गरिसक्नुभएको छ ।
निरन्तर लगाव र जलविद्युत् विकासमा समर्पण यसको मुख्य कारण हो भने कम्पनीभित्र कर्पोरेट सिष्टम, गुड गभर्नेन्स आदिले आयोजनाहरू निरन्तर अघि बढाउन आधार तयार गरिदिएको छ । गैरआवासीय नेपालीको पहलमा लगानी गर्ने भएकाले...
अब ठूला क्षमताका नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा जानुपर्छ: कुशल गुरुङ (सिइओ, वाइण्ड पावर नेपाल प्रालि)
नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना भएपनि त्यसको भरपूर उपयोग हुन नसक्दा देशले ऊर्जा संकट लामो समयसम्म भोग्नुपरेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिलाई पनि घरायसी बत्ती बाल्न वा खाना पकाउने इन्धनको रुपमा मात्र सिमित हिसाबले बुझियो ।
‘The entire nation should acknowledge need of FDI for economic growth’: BalKrishna Thapa Chhetri
I do not think that the government policies related to business and investment are negative. Nepal’s ranking has been gradually improving in the ‘doing business’ index and other competitive indicators.
ऊर्जा विकासमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ: खड्गबहादुर विष्ट
सन् १९९५ देखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएका इञ्जिनीयर खड्गबहादुर विष्ट नेपालका ऊर्जा विज्ञमध्ये एक हुन् । ऊर्जाका विषयमा हुने राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रममा उनका कार्यपत्र प्रस्तुत हुन्छन् । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा इञ्जिनीयर पदबाट यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् ।
नवीकरणीय ऊर्जामा सबैभन्दा खड्केको कुरा के हो भने त्यसको घनत्व (डेन्सिटी) हो जसलाई हामीले भण्डारण (स्टोर) गर्नैपर्छ। हामीकहाँ खाना पकाउनलाई नै बढी ऊर्जा चाहिएको हुन्छ। बिहान बेलुका खाना पकाउन नवीकरणीय ऊर्जाको त्यति साह्रो प्रयोग भएको देखिँदैन। किनकी ठूलो क्षमतामा त्यस्तो ऊर्जा भण्डारण गर्न सकिरहेका छैनौं। तर, पछिल्लो समय प्रविधि पनि विकास हुँदै गएको छ। दिउँसो ऊर्जा संकलन गरेकोलाई हामीले राती प्रयोग गर्न पनि सक्छौं। यो सम्मेलनबाट त्यस्तो खालको सन्देश दिन सकौं भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो।
नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने बढी नै चाखको विषयका रूपमा हेरिन्छ। सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोग, वातावरण मन्त्रालय जस्तो सरकारी संस्थाको पनि सहभागिता रहेकाले नीति निर्माणका लागि पनि ठूलो सहयोग पुग्ने हामीले आशा राखेका छौं। नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा कसरी सहयोग...
‘पानी र विद्युतमा अब अर्को द्वन्द्व सुरु हुन्छ’: दिपक ज्ञवाली
देश संघीय ढाँचामा लैजाने प्रारम्भमा जनमत संग्रह गरिएन । न भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षको अध्ययन भयो । तर, मुलुक चाहेर वा नचाहेर संघीयताको अन्योलमा धकेलिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि अस्थिर पाइला पनि चालिएका छन् । यद्यपि, ती संयन्त्रभित्र जलस्रोत, विद्युत...
‘अब नवीकरणीय ऊर्जाको विकल्प छैन’- राम प्रसाद धिताल
कुल ऊर्जामा ३ प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जाले ओगटेको छ । पहुँचको हिसाबले १७ प्रतिशत र लघु जलविद्युत झन्डै ३० मेगावाट वैकल्पिक ऊर्जाले स्थान लिएको छ । जसमा, सोलार लगभग ४० मेघावाट (१० लाख घरमा सोलार), १५ लाख घरमा सुधारिएको चुलो, ३० मेघावाट लघु जलविद्युत....